कर प्रशासनको पुनर्संरचना जरुरी « News of Nepal
प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत यही हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । तर करको परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको मान्यताअनुरुप न त शतप्रतिशत व्यक्ति वा फर्मले कानुनबमोजिम इमानदारीरुपमा राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेका छन्, न त कर प्रशासन ती व्यक्ति वा मर्फलाई हदैसम्म करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्छ, न करको माध्यमबाट करदातालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा आकर्षण बढाउन सकेको छ ।
यसको परिणाम नागरिकहरु राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्न हदैसम्मको प्रयत्न गर्छन् । यसले राज्यको राजस्व संकलनको लक्ष्य बराबरभन्दा बढी रकम चुहावट भएको छ । तिरोप्रतिको नागरिकको हदैसम्मको विकर्षण कर प्रशासनले राम्ररी बुझेको छ । तर, नागरिकले राज्यलाई करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी तिरेको कर व्यवस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी नहुँदा कर प्रशासन यसको दवाफदेहिताबाट बच्न देखावटीरुपमा करको दायरा बढाए पनि गुणस्तरको श्रीवृद्धिमा हदैसम्म चुकेको छ ।आजको दिनमा करको दायरा तुलनात्मकरुपमा फराकिलो अवश्य छ । तर, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने तथ्यले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ । बर्सेनि लाखौंको संख्यामा नयाँ करदाता थपिएको सरकारी तथ्यांक हामी सुन्न पाउँछौँ । यो सफलतामा राज्य गर्व गर्छ । तर, राजस्व संकलनमा लक्ष्य पूरा गर्न राज्य कति सफल भयो वा नागरिकमा करप्रतिको आकर्षण बढाउन कर शिक्षा अभियानको लक्ष्यमा गोल गर्न कर प्रशासन कति सफल भयो, यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
कर चुहावटको यथार्थ :
अनुमानितरुपमा राजस्व संकलनको करिब दुई गुणा बढी कर चुहावट भएको छ । कानुनबमोजिम राज्यलाई व्यक्ति वा फर्मले तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्नु त्यो ठूलो चुहावट हो । जस्तै– अहिले बन्द भएका ११ एयरलाइन्सले सरकारलाई करोडौं बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गरेको छ तर कम्पनीहरु कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अटेर गरिरहेका छन् । एनसेलले करबापत राज्यलाई अर्बौं रकम तिर्न बाँकी छ । तारे होटलहरुले पनि ठूलो मात्रामा कर छलेका समाचार मिडियामा आउँछन् । उद्योग व्यवसायीहरुले पनि कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दीरुपमा हदैसम्मको राजस्व छली गरेको नजिर छ । ठूला उद्योग, कलकारखानाले पनि राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पारेर तिर्नुपर्ने कर तिर्दैनन् । थोरै पुँजीमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायका सञ्चालकहरुले पनि सकेसम्म कर तिर्दैनन् ।अहिले दैनिक हजारौं नेपाली श्रमका लागि विदेश जान्छन् तर उनीहरुले राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन् । स्वदेशमा आफ्ना पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगानी गर्नेहरुले पनि राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन् । तितो यथार्थको नजिर के हो भने, नीति–नियम निर्माणकर्ता सम्पन्नहरु हुन् । उनीहरुले आफूभन्दा सानाहरुको लागि नियम बनाएका हुन् । मानौं, घरबेटीले कर तिर्दैनन् तर डेरावालाले तिर्नुपर्छ । विद्युत्को शुल्क घरबेटीले तिर्दैनन्, डेरावालाले तिर्नुपर्छ । राजस्व व्यापारीले तिर्दैनन्, उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । अस्पतालले कर तिर्दैनन्, बिरामीले तिर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थाले कर तिर्दैनन्, अभिभावकले तिर्नुपर्छ । गाडीधनीले कर तिर्दैनन्, यात्रुले तिर्नुपर्छ । प्रविधि कम्पनीहरुले कर तिर्दैनन्, प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरु कर तिर्दैनन्, उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । अध्ययन र भ्रमणका लागि धेरै नेपाली ठूलो पुँजी खर्चेर विदेश जान्छन् तर उनीहरुले राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन् । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा गाडीलाई ८ लाख पर्छ भने नेपालमा ४० लाख पर्छ । भारतमा मोटरसाइकल ३० हजारमा पाइन्छ भने नेपालमा २–३ लाख पर्छ । चीनमा १ हजार पर्ने सामानलाई नेपालमा ४०–५० हजार पर्छ ।यसको अर्थ एसियामै सबैभन्दा महँगो नेपालमा छ । नेपालमा भएको चर्को महँगीको उपज राजस्व संकलनमा राज्य उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको अवस्थामा नेपालको वार्षिक बजेटमा चमत्कार हुन्छ । तर वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्व संकलनमा उद्देश्यनजिक पुगेको दाबी गर्ने सरकार यथार्थमा धेरै असफल छ । यस्तो लाग्छ, कर प्रणालीमा दलालतन्त्रको सबैभन्दा प्रभाव छ र कर प्रशासन दबाबमा छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत् लगायतमा माफियातन्त्र र दलालतन्त्रको प्रभाव अचाक्ली रहेको हुँदा करको दायरा फराकिलो हुँदै गए पनि प्रभावकारिता खुम्चिँदै गएको छ । दलालतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘तिमी पनि खाऊ, हामीलाई पनि लेऊ’ भन्ने नीतिको साँठगाँठले करको स्वच्छता र पारदर्शिताको सवालमा कर प्रशासन जवाफदेयी हुन सकेको छैन ।
कर प्रशासनको दरिद्रता
पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारिता दयनीय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वैदेशिक रोजगार, विभिन्न व्यापार व्यवसाय सबै–सबै क्षेत्रमा कर चुहावटका ठूला–ठूला छिद्रहरु छन् । ती छिद्रहरु जसलाई माफियातन्त्र, दलालतन्त्र र कर्मचारी तन्त्रले झन् ठूला–ठूला बनाउँदै छन् । जसको असर करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारिता झन्–झन् दयनीय हुँदै गएको छ । यसमा कर प्रशासनको ठूलो गल्ती छ । कर प्रशासन कर चुुहावटका छिद्रहरु पुर्दै आमव्यक्ति, व्यवसायलाई करको दायरामा अनिवार्य ल्याउने, कर शिक्षाको पहुँचलाई सबैभन्दा तल्लो निकायसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यको लक्ष्यमा सिर्जनशीलता देखाउने होइन । बरु सहजता र लाभको दृष्टिबाट गरिब जनतामाथि बढ्दै गएको महँगीको फाइदा खास उद्योग व्यवसायलाई निशानामा राखेर तिनको प्रयोगकर्ता र पहुँचको आधारमा कर वृद्धि गर्ने नीतिको अवलम्बन कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो दरिद्रता हो ।अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयु) ले सार्वजनिक गरेको आईसीटी प्राइस ट्रेन्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामै दूरसञ्चारमा नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । जुन चर्को करका कारण सर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । त्यस्तै, सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुप¥यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आ.व. ०७१÷७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपियाँ राजस्व थियो तर आ.व. ०७२-७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ कर थपेका थिए ।चालू आ.व. ०७७÷७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५.२० रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२–१२ रुपियाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । अतः इन्धनमा कर, ५१ मा किनेको पेट्रोलमा ५४ रुपियाँ राजस्व बढेको छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा दलाल, माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा बढ्दै गएका कर चुहावटका ठूला छिद्रहरु पुर्ने र व्यक्ति–फर्मलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यमा जित हासिल गर्नुको साटो पहुँचको आधारमा जनताले सबैभन्दा धेरै उपयोग गर्ने वस्तुमा निरन्तररुपमा एकछत्र अचाक्ली कर बढाइरहनाले करको प्रभावकारितामा झन् ह्रास आउँछ भने कर चुहावटका छिद्रहरु झन् बढ्दै जान्छन् ।
कर प्रशासनको आगामी भूमिका :
अहिले मुलुक संघीयतामा छ । संघीयता जीवित राख्न आर्थिक पहुँच र यसको व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका छ । नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका झन् बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक प्रकोप र कोभिडजस्ता आकस्मिक महाव्याधिका कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै गएको छ भने नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको सवालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न वार्षिक पौने ६ खर्ब अपुग भएको तथ्य पनि अर्कोतिर छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा अनि सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीले सञ्चालन गर्ने हुँदा आगामी दिनमा समृद्धि एवं सुशासनका निम्ति कर प्रशासनको भूमिका झन् बढ्ने छ ।राज्यले आम्दानीको स्रोत र रोजगार बढाउन बेचिएका वा बन्द भएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखान, चलचित्र विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र, बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयाल, रघुपति जुट मिल्स, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा तथा टायल उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भव भएसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा स्वदेशमा नै उत्पादन बढ्न गई दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ ।बन्द सार्वजनिक संस्थान पुनः ब्युँताउनाले कर प्रशासनको मनोबल र पहुँच ह्वात्तै बढ्ने थियो । मुलुकमा कर प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भएन भने तथा आर्थिक आम्दानीका सम्भावित स्रोतहरुको पहिचान, उत्खनन् एवं करको दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारिताको समान वितरण र गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने मुलुकको संघीय परिवर्तनको असफलतासँगै आमनागरिकको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सुनौलो सपना साकार पार्ने दृढ अठोट र आत्मविश्वास केवल शून्यमा शून्यसरि बिलाउने छ ।
(लेखक अदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)